'Rakkoo naannoo Amaaraa duuba ABO'n jiraachuu ragaa qabna' - aanga'aa Amaaraa - BBC News Afaan Oromoo
Tibbana Naannoo Amaaraa Godina addaa Saba Oromoo fi Godina Shawaa Kaabaa keessatti walitti bu'iinsa mudate ilaalchise yaada walfaallessutu kennamaa jira.
Ajajaan Olaanaa Waraana Itoophiyaa Kutaa Kaabaa Mejar Jeneraal Geetachoo Guddinaa gaaffiifi deebii EBC waliin taasisaniin, "Caasaa nageenyaa naannichaa sadarkaan jirutu rakkinicha uumee," jedhanii ture.
Itti-gaafatamaa Itti-aanaan Biiroo Nageenyaa Naannoo Amaaraa Obbo Gadabee Hayiluu garuu ibsa aanga'aa waraanaa kana ni mormu.
"Humna addaas ta'ee caasaan nageenyaa naannichaa ergamasaa kan beekuufi nageenya uummata naannichaa eeguu malee sababni miidhuuf hin jiruu" jechuun BBC'tti dubbataniiru.
Yaadni akkasii dogoggoraafi mirga uummata Amaaraa tilmama keessaa kan hin galchinedha jedhu Obbo Gadabeen.
Aanga'ooti naannichaa rakkoo ummameef irra deddeebiin waraana ABO himachaa turan.
Haa ta'u malee aanga'oonni waraanaafi bulchitooti Godina Addaa Saba Oromoo naannichaa waraanni ABO naannicha keessa socho'u akka hin jirre irra deddeebiin ibsaniiru.
Obbo Gadabeen garuu "naannoo kana humni socho'uu jiraachuu ragaa qabna," jedhu.
Haleellaan kan raawwatame uummata Amaaraafi namoota nagaarratti kan jedhan aanga'aan kun, kana kan raawwate humna addaa ykn 'Liyyu Hayil' Amaaraati jechuun maal jechuudha jedhanii gaafatu.
Kuni kan jedhamuf "qaamni kana raawwate seeraan akka hin gaafatamne gochuuf ykn poolisoota nageenyaafi tasgabbii uummata naannichaa eegan amanamummaa dhabsiisuufi" jedhu.
Ibsa ajajaan olaanaa waraana kutaa Kaabaa kennan, "ani hin dhageenye, garuu akkanatti dabarfame taanaan sirrii mitii," jedhu.
Haleellaan kun loltoota ABO'n raawwatamuusaaf sababa sadii dhiyeessan.
Sababni jalqabaa, qe'ee qonnaan bultoota Oromoorraa marsuun Amaarri amantii keessan isiin jijjiirsisuufi eenyummaa keessan sarbuuf socho'aa jiraa jechuun kakaasaa akka turan qonnaan bultoonni Oromoo nutti himaniiru jedhu.
Lammaffaa, humna qaamolee nageenya naannoon ol ta'e, gurma'aa fi qinda'aa ture jedhu.
Sadaffaan, akkaata itti hiriirsifamaniifi ramaddiisaani ilaalutu danda'ama jedhu.
Oromoofi Amaarrii walitti makamanii jiraatu garuu, haleellan kun kan raawwatamee Axaayyeefi Maajatee iddoo namoota Afaan Amaaraa dubbatanirrattis jedhu.
ABO'n himata aanga'oonni naannicha irratti dhiyeessan balaaleffachuun ibsa baasee ture.
Humna hidhatee socho'u
Jiruun hawaasa naannoo Walloo hidhannoon walqabata, aadaadhaanis meeshaa hidhachuun naannichatti baramaadha jedhu Meejar jeneraal Geetaachoon.
Dabalataan amma gandaatti qaamni nageenyaa hidhate jira kan jedhan aanga'aan kun, kanaan alatti qaamni hidhate kan biraan hin jiru," jechuun dubbataniiru.
Obbo Gadabeen garuu durumaa Baha Amaaraa keessa gartuun leenjii loltummaa kennuu jiraachuu Mootummaan Naannoo Amaaraa quba qaba ture jedhu.
Leenjichi daangaa Naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Affaar gidduutti ta'uun isaa to'achuuf akka isaan rakkiseefi dhimmicha qulqulleessuun yeroo fudhachuu himu.
Rakkoo naannichatti uumamee mootummaan koree ijaaree qorachaa akka jiru aanga'oonni waraanaa miidiyaalee biyya keessaaf himaniiru.
Itti-gaafatamaan Waajira Itti-aaanaa Ajaja Humna Ittisaa Koloneel Tasfaayee Ayyaalew yaada M/J Getaachoo kana kan mirkaneessan yommuu ta'u, nageenya naannichatti akka boora'u ta'eef qaama itti gaafatamu adda baafachuuf ni hojjetama jedhan.
"Gabaasni erga dhufee booda eenyutuu waraana kana bane? Eessaa dhufan? Eenyutu gaggeesse? kan jedhu ni ilaalama jedhu hogganaan Waajjira Itaamaazhoorii Itti-aanaa Koloneel Tasfaaye Ayyaalewu.
Himannaa aanga'oonni naannoo Amaaraa ABO irratti dhiyeessan ilaalchisuun, "ABO kan jedhamu achi hin jiru. ABO'n hidhatee socho'u achi hin jiru, miseensi ABO garuu jiraachuu ni mala, wanta beeknu hin qabnu" jedhu.
"Miseensi ammoo paartii barbaade deggaruun mirga isaati," jedhan.
"Uummanni Godina Saba Oromoo sirriitti beeku, yaada isaaniis sirriitti ibsachaa jiru. Callisanii akkuma durii sana waan tokko yeroo dubbatamu gara dhaaba tokkootti maxxansuun hin danda'amu" jedhaniiru.
Dubbiin meeshaan waranaa naannoo sanatti qabame jedhu olola miidiyaalee hawwaasummaati jedhu koloneel Tasfaayeen.